Wiko View 2 Go: Famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Wiko View 2 Go: fari-fampidirana misy ny notch sy bateria 4.000 mAh
Eder Ferreño | | bateria, Finday, About us
IFA 2018 dia efa natomboka, izay maneho zava-baovao amin'ny marika maro karazana. Wiko no iray tamin'ireo voalohany nanolotra ny zava-baovao tamin'ny hetsika. Anisan'ireny no ahitantsika ny Wiko View 2 Go, ny faritra fidirana vaovao anao. Izy io dia fivoaran'ny ny View, natolotra tamin'ny taona lasa tao amin'ny IFA. Ary mitondra modely ity maodely ity.
Hanombohana azy dia afaka mahita azy mazava tsara amin'ny endrika izy. Hatramin'ity Wiko View 2 Go ity dia miloka eo amin'ny toerana ambony, mitondra an'io lamaody io koa amin'ny laharam-pidirana. Misongadina ihany koa izy amin'ny fananana bateria lehibe, izay mampanantena fahaleovan-tena betsaka.
Ity ambaratonga fidirana ity dia mahavariana indrindra noho ny famolavolana azy. Ny marika dia nisafidy famaranana vera, izay manome endrika mirentirenty kokoa, tsy mahazatra amin'ny sehatry ny fidirana. Ny notch koa dia mipoitra amin'ity maodely ity, ary mazava fa manolo-tena mafy aminy ny marika. Ireto misy famaritana feno amin'ny Wiko View 2 Go:
efijery: IPS 5,93 santimetatra miaraka amin'ny famaha HD + sy ny tahan'ny 19: 9
Fitahirizana anatiny: 16/32 GB (Azo zahana amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: MP 12 miaraka amin'ny HDR, LED Flash, PDAF, Video 1080p amin'ny 30fps
Fakan-tsary eo aloha: MP 5
ny hafa: RadioFM, mamoha tarehy
lafiny: 153.6 x 73.1 x 8.5 mm
lanja: 160 grama
Raha fintinina, miatrika telefaona mifanaraka amin'ny masontsivana izahay. Mianjera eo anelanelan'ny ambany sy ny eo afovoany eo amin'ny lafiny endri-javatra izy io. Ka mahatratra ny ampahany mitombo, nefa ao no misy ny fifaninanana be.
Ny Wiko View 2 Go dia amidy androany ary tonga any am-pivarotana amin'ny loko isan-karazany: Blue-violet, mena mena ary mainty. Misy kinova roa an'ny telefaona misy, amin'ny resaka RAM sy fitehirizana anatiny. Ny voalohany miaraka amin'ny 2/16 GB dia vidin'ny 139 euro. Ny andiany faharoa, miaraka amin'ny 3/32 GB dia handoa 159 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Wiko View 2 Go: fari-fampidirana misy ny notch sy bateria 4.000 mAh
Tsy afaka milalao horonantsary Netflix HD amin'ny Pocophone F1
Ny sary tena izy an'ny Google Pixel 3 dia voasivana